Budata Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition maka Windows
Budata Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition
Budata Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition,
Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition, nke megoro akara ya netiti egwuregwu ụdị 2022 ma malite ya ka ọ dị taa, na-ere na Steam. Ewepụtara nelu ikpo okwu Windows, Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition ga-emere onwe ya aha dị ka egwuregwu na ihe egwuregwu. Emepụta ihe a, nke ga-akwado egwuregwu egwuregwu otu onye ọkpụkpọ, na nkwado maka asụsụ iri na abụọ. Mmepụta a, nke ndị egwuregwu kọmputa na-atụsi anya ike, ga-amasị ọtụtụ nde mmadụ na akụkọ ya pụrụ iche. Egwuregwu ahụ, nke na-akwado ọdịnaya kachasị ukwuu nke usoro ahụ, ga-enye ndị na-egwu egwuregwu ikuku ikuku na-adọrọ adọrọ na ihe ngosi ya.
Ị ga-enwe ohere ịnweta ọnọdụ egwuregwu ọhụrụ na mmepụta, nke ga-enye ndị na-egwu egwuregwu ahụ ọtụtụ ihe na-ekpo ọkụ ma na-akpali akpali. Nhọrọ ndị a na-eme na egwuregwu ahụ ga-emetụta akụkọ egwuregwu ahụ nụzọ dị mma ma ọ bụ nke na-adịghị mma, ha ga-agbalịkwa inwe ọganihu na egwuregwu ahụ na akụkọ mgbagwoju anya. Nime egwuregwu ebe ị ga-arụ ọrụ dị ka onye ndu nke mgbanwe mgbanwe, mmepụta, nke ga-ezute ndị egwuregwu nwere ihe isi ike dị iche iche, ga-akwado egwuregwu na-adọrọ adọrọ.
Oddworld: Akụkụ Mbipụta akwalitekwa Soulstorm
Ụdị egwuregwu otu onye ọkpụkpọ,
Akụkọ pụrụ iche
mmetụta ụda pụrụ iche,
Egwuregwu na egwuregwu juru nọnụ,
Ihe isi ike na ihe egwu dị iche iche,
Nweta ọdịnaya ọhụrụ,
Ndị na-egwu egwuregwu, bụ ndị ga-arụ ọrụ dị ka onye ndu nke mgbanwe ahụ, ga-ezute oge na-eme ihe na egwuregwu na-aga nihu. Na mmepụta, nke na-enye ndị na-egwu egwuregwu ma ihe omume na egwuregwu na-aga nihu na-enwe nsogbu dị iche iche, ndị egwuregwu ga-ezute ihe isi ike dị iche iche ka ha na-aga nihu. Ndị na-egwu egwuregwu ga-anwa imeri ihe isi ike ndị a na njirimara dị iche iche ga-ahụ onwe ha na ọnọdụ asọmpi. Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition, nke ga-enye ndị egwuregwu oge na-akpụ akpụ nwere eserese dị elu.
Emere ya ka ọ dị na June 21. Egwuregwu ime ihe omume, nke meghere maka ire ere na ọnụahịa mara mma, na-agwakọta akụkọ ọgba aghara nke ọha mmadụ ma na-enye ya ndị na-egwu egwuregwu. Ọ na-enye ngosi ngosi nefu nye ndị egwuregwu na Steam na-azụghị egwuregwu ahụ. Ndị na-egwu egwuregwu nwere ike ibudata ụdị ngosi ngosi nke egwuregwu ahụ na Steam wee nwee ohere ịnweta egwuregwu ahụ na obere ọdịnaya.
Budata Oddworld: Mbipụta nkwalite mkpụrụ obi
Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition, nke Oddworld Inhabitants mepụtara ma bipụta ya na Steam, na-aga nihu ahịa ya na mkpado ọnụahịa mara mma. Egwuregwu ahụ, nke na-agụnyeghị nkwado asụsụ Turkish, malitere nụwa nile na nhọrọ nke asụsụ 12 dị iche iche.
Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition Ụdịdị
Mmepụta: Oddworld Inhabitants Inc